Indlu kaTatomkhulu kunye neGadi-Igumbi laBucala #4
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguBernardo
Igumbi labucala elixhotyiswe ngokupheleleyo, kwindlu ephangaleleyo kakhulu, exhotyiswe ngokukhethekileyo kwiindwendwe. Umamkeli uhlala kwenye indlu ekufuphi. Indlu eyilelwe ukuhlala kamnandi kunye neTropiki kwindawo entsha kunye nekhanyisiweyo yangaphakathi.
Unokufikelela ngokukhawuleza kwizithuthi zikawonke-wonke kunye neendlela eziphambili zokuya kuyo yonke indawo: ii-ofisi zikawonke-wonke kunye nezoshishino, iindawo zokuthenga, izithuthi, iindawo zokutyela, iipaki, ii-cinema kunye neendlela. Wifi, minisplit, smartv. Wamkelekile.
Umyezo wethu omhle likhusi eliluhlaza, elijikelezwe yimango, ilamuni nemithi yeziqhamo zebhanana, kunye nemithi yesundu, ezaliswe zizityalo ezidubulayo, iindonga ezigqunyiweyo, ezixhonywe kuhlaza lwamagqabi amancinane. Ngokukhanya kunye netafile yangaphandle. Inokonwabela ngokukhethekileyo emva kwemini nangokuhlwa, kodwa nasekuseni, emthunzini wemithi yethu.
EPlaza Cibeles, iibhloko ezimbini ukusuka endlwini, kukho indawo yokutyela elungileyo kunye nevenkile yokuphakela. Amanyathelo ambalwa ukusuka, kukho egqwesileyo, ipari ye-ayisikrimu yesintu. Kufuphi kukho iindawo zokutyela ezinikezela ngenyama, ukutya kwaselwandle, i-barbecue, ii-tacos. Kwakhona, ukususela emva kwemini kukho iindawo zepikiniki ezinemenyu emnandi yendabuko: imifuno, itshizi, i-stews, i-roasts yenyama kunye neebhanana. Iklabhu yelizwe, ekufutshane kakhulu, yindawo entle enemithi enedama lokuqubha, iingoma zokuhamba okanye ukubaleka, iinkundla zentenetya, ibhola yomnyazi, ibhola ekhatywayo, ifronton, kunye neshawa kunye neebhafu zesauna. Ngeenyawo okanye ngemoto ungafikelela kwiivenkile ezinkulu zaseChedraui naseAurrera, nakwimarike yoluntu. Kwakwindawo enye, ecaleni koMlambo iCoatán, kukho umkhondo omangalisayo wetartan wokuzilolonga: ukuhamba, ukubaleka. Ecaleni kwendlu yiKliniki yeNaval, iibhloko ezimbalwa ukusuka kwiZiko lezeMpilo kwaye ngemizuzu emithathu, uhamba, unokufikelela kwiivenkile eziluncedo: Oxxo, Cibeles kunye neLoo.
Umnini wefama uya kukwazi ukujongana nezicelo zolwazi kwaye aphile neendwendwe zakhe ezinqwenelayo, kunye nokubathatha ngesithuthi sakhe ukuya kwiindawo abafuna ukuzindwendwela elwandle, kwiilwandle, kumachibi amahle kunye namachweba amakhulu. , singqongwe ukumisa amahlathi of mangroves; okanye kwindawo yezinto zakudala kunye neentaba, iidolophu kunye nezinto ezinomtsalane zendalo (imilambo, iingxangxasi, amahlathi) kwindawo yamasimi ekofu.
Umnini wefama uya kukwazi ukujongana nezicelo zolwazi kwaye aphile neendwendwe zakhe ezinqwenelayo, kunye nokubathatha ngesithuthi sakhe ukuya kwiindawo abafuna ukuzindwendwela elw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tapachula